क्यानेडियन लिगमा सन्दिपको शानदार प्रदर्शन, लगातार तीन विकेट ! - Everest Dainik - News from Nepal
क्यानेडियन लिगमा सन्दिपको शानदार प्रदर्शन, लगातार तीन विकेट !
काठमाडौं, असार २१ । सन्दिप लामिछानेले क्यानडामा जारी ग्लोबल क्यानेडियन लिगमा शानदार प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार साँझ भएको एडमोनसन् रोयल्ससँगकाे खेलमा सन्दिपले शानदार प्रदर्शन गरेका हुन् । उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै टिमले पहिलो जित निकालेको छ । लगातार तीन खेल हारेको सन्दिपको टिमले बिहिबार पहिलो जित दर्ता गरेको हो ।
खेलमा सन्दिपले चार ओभर बलिङ गर्दै १ विकेट लिए । हिजोको खेलमा पनि उनले मेडन विकेट लिए । प्रतियोगितामा सन्दिपको दोस्रो मेडन विकेट हो । उनले पहिहो ओभरमा नै विकेट लिएका हुन् । सन्दिपले तीन खेलमा तीन विकेट लिएका छन् । हिजोको खेलमा उनले मात्र १६ रन खर्च गर्दै १ विकेट लिन सफल भएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस बिग ब्यास लिगः सन्दीप आवद्ध मेलबर्नको लगातार दोस्रो जीत
टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको सन्दिप आवद्ध टिम मोन्ट्रेल टाइगर्सले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतीमा १२९ रन मात्र बनाउन सक्यो । उसका लागि मोइसेस हेन्रीक्वीसले अर्धशतक बनाउन बाहेक अन्यको प्रदर्शन खासै राम्रो रहेन । १३० रनको लक्ष्य पछ्याएको एडमोनसन् रोयल्स ५ बल बाँकि छदै अलआउट भए । उसका लागि लुके रोन्चीले ३० रनबाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन सम्झनलायक भएन ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीप बिग बास लिग खेल्न अस्ट्रेलिया प्रस्थान
रोयल्स्लाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा टाइर्गसका पिटर सिड्डीलेको उत्कृष्ट बलिङ रह्यो । उनले ३ ओभर १ बल बलिङ गर्दै महत्वपूर्ण ४ विकेट लिन सफल भए । यस्तै, लाथिस मालिङ्गा र केभरकोस्टन कोपरले दुइदुई र सुनिल नारायनले १ विकेट लिन सफल भए । लगातार तीन खेलमा हार व्यहोरेको मोन्ट्रेल चौथो खेलमा जित निकाल्दै लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तो छ लिगको तालिका-
याे पनि पढ्नुस बिग बास लिगः सन्दीपको टिमले टस जित्यो, पहिला बलिङ गर्ने [अपडेट]
ट्याग्स: Global T20 Canada, sandeep lamichhane